कजको (पेरू) मा के गर्ने: शहर मा तपाइँको यात्रा को लागी एक व्यावहारिक गाइड यात्रा समाचार
कुजको थियो Inca साम्राज्य को राजधानी र, औपनिवेशिक समयमा, यो भयो पेरूको विकरयल्टीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहरहरू मध्ये एक। त्यसकारण यो आश्चर्यको कुरा होइन कि पूर्व कोलम्बियाली अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो साम्राज्यको स्नायु केन्द्र के थियो जुन इतिहासले सास फेर्ने ठाउँहरूको सौन्दर्यलाई सुरक्षित राख्छ। यो युनेस्को द्वारा प्रमाणित छ, जसले १ 1983 XNUMX मा कुज्को घोषणा गर्‍यो विश्व सम्पदा।
शहरको अर्को आकर्षण यसको हो परिदृश्य समृद्धि। हुनु एन्डिज पर्वतमा अवस्थित, समुद्री सतह माथि 3399 XNUMX।। मिटर मा, यसको धेरै खास जलवायु अवस्था छ जसले यसलाई ठूलो जैव विविधता प्रदान गर्दछ। त्यसोभए, यदि तपाईं पेरूको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, कुजको र यसको वरपर तपाईंको मार्गमा अनिवार्य स्टप हुनुपर्दछ.
यसैले कि तपाईं कुनै पनि प्राकृतिक परिदृश्य, पुरातात्विक खजाना र स्मारक स्मारक सम्झना छैन, म तपाईंलाई यो पोस्ट मा प्रस्ताव गर्दछ कुज्कोमा भ्रमण गर्नका लागि सबैभन्दा रोचक ठाउँहरूको सूची र म तपाईंलाई गतिविधि र यात्रा को बारे मा जानकारी दिनेछु जुन तपाईं शहरको नजिक गर्न सक्नुहुन्छ।
1 के कस्को शहर मा यात्रा गर्ने
1.1 कुज्कोको इन्का सार
1.1.2 १२ कोणको ढु .्गा
1.2 भाइरयल्टीको पैतृक सम्पत्तिको माध्यमबाट मार्ग
1.2.1 सान ब्लास पड़ोस
1.2.2 कुज्को क्याथेड्रल
1.2.3 कुज्को चर्चहरू
1.3 शहरलाई अर्को परिप्रेक्ष्यबाट जान्नुहोस्
1.3.1 सैन पेड्रो बजार
2 तपाइँ कस्कोबाट के भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ
3 तपाईंको कस्कोको लागि व्यावहारिक सल्लाहहरू
3.1 कसरी Cusco मा पैसा परिवर्तन गर्ने
3.2 कुज्को वरिपरि कसरी पुग्ने
3.3 कुस्को पर्यटक टिकट
3.4 नि: शुल्क यात्रा
3.5 उचाई रोगबाट सावधान रहनुहोस्!
3.6 पानी र खाना
के कस्को शहर मा यात्रा गर्ने
कुज्कोको इन्का सार
स्थापना भएको मिथकको अनुसार, कुजको हजारौं वर्ष पहिले सूर्यको क्वेचुआ देवता, इन्तीको डिजाइनले बनाएको हो। यद्यपि तिनीहरू अवस्थित छन् शहर को स्थापना को आसपास विभिन्न किंवदन्तीहरु, म तपाईंसँगै साझेदारी गर्नेछु जो इन्का गार्सेलासो डे ला भेगाले फैलाएको थियो। म पहिलो कुजको आइपुग्दा उनीहरूले मलाई भनेका यो पहिलो थियो र हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा मेरो सम्झनामा यो विशेष ठाउँ ओगटेको छ।
पौराणिक कथा अनुसार, हजारौं वर्ष पहिले सूर्य देवताले आफ्ना दुई छोराहरूलाई पृथ्वीमा पठाए, मानको कोपाक र मामा ओक्लोनयाँ शहर स्थापना गर्ने कामको साथ। ती भाइहरू उनीहरूसँगै टिटिकाका तालमा गए सुनको रड जुन अहिलेको कुजको पुग्दा जमीनमा झुण्डिएको थियो केवल एक हिट द्वारा। यसैले यो निर्णय गरियो कि त्यो नयाँ शहर खडा गर्ने निश्चित स्थान कुन हुनेछ
सबै पौराणिक कथा भन्दा पर, के एक प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य यो हो कुज्को इन्का साम्राज्यको शक्तिको केन्द्र थियो आज पनि दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पुरातन सभ्यताको एउटा सम्पदा अझै शहरमा सुरक्षित छ। यदि तपाईं कुजको जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले यसको जराबाट शुरू गर्नुपर्दछ, त्यसैले म तपाईंसँग बाड्न चाहन्छु केहि स्थानहरू जुन तपाईंलाई कुजकोको ईन्का सार पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ.
कोरिकान्छा थियो मुख्य इन्का मन्दिर कुज्कोमा निर्मित। यसको नाम दुई क्वेचुआ शब्दहरूको मिलनबाट आउँदछ: "क्विरी", सुन, र कान्छा, मन्दिर। यो "सुनहरी मन्दिर" मा सूर्य, ईन्डी, सूर्य को पूजा थियो। यसको भव्य संरचना र असामान्य सजावट देवतालाई श्रद्धांजलि थियो। अगाडि ढु stone्गाको पर्खालले बनेको थियो र, समय को कथाहरु को अनुसार, एक प्रकारको संग शीर्ष शुद्ध सुन किनार.
दुर्भाग्यवस, स्पेनिशको आगमनसँगै कोरिकान्चाको मूल उपस्थिति हरायो र, मन्दिरको भित्ताहरू संरक्षण गर्दै सान्तो डोमिंगोको आखाडा बनाइएको थियो (१ 1963 XNUMX), पेरूमा डोमिनिकन आदेशको पहिलो। इन्का फाउन्डेसनहरू प्लास्टर र क्याथोलिक चित्रहरू सहित कभर गरिएको थियो १ 1650० मा भूकम्पको कारण भवन आंशिक रूपमा ध्वस्त भयो, पुरानो मन्दिरको भग्नावशेषलाई पुन: सफा गर्दै। Qorikancha भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस्, यो को एक राम्रो उदाहरण हो संकर वास्तुकला र एक जीवित आरहालको कुजको आकार दिने चरणहरूको eflect।
१२ कोणको ढु .्गा
हातम रुमियोक स्ट्रिटमा अवस्थित १२ एled्गल स्टोन, हो ढु stone्गा खण्ड "हरियो डियोराइट" त्यो भाग थियो Inca Roca को महल। भित्ताको बीचको ढु stone्गा १२ एles्गल छ, तसर्थ यसको नाम, चरम सटीकता र त्यो संग कोरिएको छ बाँकी टुक्राहरूको साथ पूर्ण रूपमा भेला हुनुहोस्। यस प्रकारको संरचना, ईन्का संस्कृतिमा धेरै सामान्य, ढु any्गा कुनै प्रकारको मोर्टार बिना फिट हुन अनुमति दिन्थ्यो। कि महलहरू र यस प्रकारले बनाएको मन्दिरहरू अझै उभिरहेका छन् तिनीहरूको दृढताको प्रमाण हो।
इन्का रोकाको आदेशले बनाएको दरबार पनि स्पेनीहरूको (१ XNUMX औं शताब्दी) नआउन्जेलसम्म तिनका सन्तानहरूको निवासस्थल थियो। औपनिवेशिक कालमा यसलाई लुटियो र प्रसिद्ध पर्खाललाई आधारको रूपमा राख्दै, स्पेनिशहरूले ब्युनाभिष्टको हाउस अफ मार्क्विस र रोकाफुएन्टेको मार्क्विसको दरबार बनाए। अन्तमा, भवन चर्चलाई दान गरी आर्चबिसप दरबार बनायो। हाल यो कुज्को शहरको धार्मिक कला संग्रहालय पनि हो।
यद्यपि एक प्राथमिक कुरा तपाईले सोच्नुहुन्छ कि ढु stone्गाको पर्खाल देख्नु धेरै आकर्षक गतिविधि होइन, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि जब तपाई कुजको भ्रमण गर्नुहुन्छ तपाईले यो स्टप छोड्नुहुन्न। ढु stone्गाको आयाम र संरचनाको पूर्णताले तपाईंलाई उदासीन छोड्दैन। थप रूपमा, एक सार्वजनिक सडकमा भएर, तपाईंले यसको भ्रमण गर्न केहि पनि भुक्तान गर्नुपर्दैन र तपाईंलाई कुनै कार्यक्रमको बारेमा सचेत हुनुपर्दैन, तपाईं दिनको कुनै पनि समयमा यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ।
जब हामी ईन्का पुरातात्विक अवशेषको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी प्रत्यक्ष रूपमा माचू पिचूको बारेमा सोच्दछौं। यद्यपि कुज्कोमा त्यहाँ अन्य पुरातात्विक साइटहरू छन् र प्राचीन शहरहरूको भग्नावशेषहरू जुन हेर्न लायक छन्। यद्यपि तिनीहरू कम पर्यटकीय स्थानहरू छन्, तिनीहरू समान रूपमा रमाईलो छन् र शहरमा तपाईंको प्रवासको समर्पित अंश उनीहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि, कुनै श doubt्का बिना, एक ठूलो सफलता हो।
क्युजको नजिकै, लगभग प्लाजा डी अरमासबाट minute० मिनेट पैदल, Sacsayhuamán को खंडहर हो। पुरातन Inca दुर्ग एक पहाड को शीर्ष मा एक शानदार परिदृश्य मा स्थित छ। वास्तवमा, विनाशबाट तपाईं सक्नुहुन्छ कुस्कोको सब भन्दा प्रभावशाली पानोरामिक दृश्यहरूको आनन्द लिनुहोस्। "Sacsayhuamán" कोचुआबाट आएको शब्द हो र यसलाई अनुवाद गर्न सकिन्छ: "बाजलाई तृप्ति गरिएको ठाउँमा", सम्भवतः यो नाम बाकहरूले दिएको छ जुन महान वास्तुकलाको काममा उडेर जान्छ।
Sacsayhumá एक प्रामाणिक शहर थियो, विशाल, जस मध्ये केवल x हेक्टर संरक्षित छन्। यसले सबै प्रकारका निर्माणहरू राख्दछ: पवित्र र औपचारिक भवनहरू, आवासहरू, धरहरा, एक्वेक्टक्ट्स ... ईन्का शहरमा अझै अझै सुरु tunहरू, ढोकाहरू, पर्खाल र धरहरा छन् र यद्यपि धेरै जसो हराएको छ, विगतमा यसको विशालता र महिमाको कल्पना गर्न सजिलो छ।
भाइरयल्टीको पैतृक सम्पत्तिको माध्यमबाट मार्ग
औपनिवेशिक अवधिले कुजको शहरलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्‍यो। स्पेनिशको आगमन पछि, धेरै Inca भवनहरू ध्वस्त वा रूपान्तरण गरियो, जसमा एउटा शहर मजबूत भयो इन्का शैली बसोवासकर्ताहरू द्वारा आयात गरिएको बारोकसँग एकसाथ रहन्छ। १ earthquake1650० को भूकम्प पछि शहरमा असंख्य भवनहरू निर्माण गरिए र स्मारक कुज्को धार्मिक भवनहरूको उपस्थिति द्वारा विशेषता। कुज्कोको औपनिवेशिक वास्तुकला प्रभावशाली छ र विस्तृत रूपमा खोजी गर्न योग्य छ। कम्तिमा मेरोलागि, आवश्यक पोइन्टहरू हुन् भनेर म तपाईंहरूसँग बाँड्न चाहन्छु यदि तपाईं कल्पना गर्न चाहानुहुन्छ कि पेरूको भावाधिकारको लागि इन्का पूंजी कत्तिको रहेछ।
ब्यारियो डि स्यान ब्लास पूर्ण स्पेनिशको आगमन संग मर्मत गरिएको थियो, त्यसैले यो औपनिवेशिक वास्तुकलाको राम्रो उदाहरण हो। यसका ठाडो सडकहरू, ढु stone्गाका फ्लोरहरू र सडकहरूमा सेट गरिएका स्टालहरूले यस छिमेकलाई एउटा विशेष जीवन र उत्तम पर्यटकको चासो दिन्छ।
प्लाजा डी अरमासमा अवस्थित इन्का वाइरोचाको महल कुन ठाउँमा थियो, आज कुज्को कैथेड्रल छ पेरूमा बारोकको सब भन्दा प्रस्ट उदाहरणहरू र यो सम्पूर्ण शहरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रिश्चियन मन्दिर भएको छ।
चर्च स्पेनी बसोबासहरूको साथ देशमा आइपुग्यो र यससँगै शहरमा असंख्य क्याथोलिक उपासनास्थल र भवनहरू निर्माण गरियो। १ 1973 XNUMX मा, शिक्षा मन्त्रालयले कुज्कोको स्मारक क्षेत्रमा राष्ट्रको सांस्कृतिक सम्पदा घोषणा गर्यो, यी भवनहरूको सौन्दर्य र ऐतिहासिक मूल्य मान्यता। यदि तपाईं स्मारक कुजको बाट हिंड्नुहुन्छ भने, चर्च अफ कम्पनी र दयाको मन्दिर देख्न आवश्यक छ।
शहरलाई अर्को परिप्रेक्ष्यबाट जान्नुहोस्
दर्शनीय स्थलहरु केवल भवनहरु भ्रमण गरीरहेको छैन र प्रतीकात्मक स्मारकहरू। कहिलेकाँही हामी सहरको सबैभन्दा प्रामाणिक तस्बिर लिन्छौं जुन यसको सडकमा उद्देश्यहीन हिडिरहन्छ वा स्थानीय बजारमा जान्छ र दैनिक गतिविधिहरू अवलोकन गर्दछ।
कुज्कोको ऐतिहासिक र स्मारक सम्पदा निर्विवाद छ, तर यो पनि छ शहर धेरै प्रामाणिक छ। यदि तपाइँ पेरूको संस्कृतिलाई भिजाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने अर्को दृष्टिकोणबाट पेरूको यस गहनालाई चिन्नुहोस्ठाउँहरू ध्यान दिनुहोस् जुन म तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दैछु तल।
सैन पेड्रो बजार
सान्ता क्लारा सडकको छेउमा अवस्थित स्यान पेड्रो मार्केट, १ 1925 २। मा स्थापित, अझै जारी छ कुज्कोमा स्थानीय वाणिज्यको केन्द्रबिन्दु। ताजा उत्पादनहरू, परम्परागत शिल्प, फूलहरू, मसलाहरू, विशिष्ट मिठाईहरू स्टलबाट स्टलसम्म थुप्रिएका हुन्छन्, सिर्जना गरेर रंग र स्वादको विस्फोटन कि अचानक तपाईं पेरू संस्कृति मा डुबाउन।
तपाईले क्वेचुआमा बोल्ने व्यक्तिहरू सुन्नुहुनेछ, चलाख विक्रेताहरूले आफ्नो अन्तिम अस्तित्व राख्न आवाज उठाउँछन् र तपाईं ती अज्ञात पर्यटकहरूको भाग बन्नुहुन्छ जो कुजकोका मानिसहरूसँग मिलन गर्नुहुन्छ जो त्यहाँ हरेक दिन किनमेल गर्न जान्छन् र ती विवरणहरूमा मोहित छैनन्। प्रत्येक स्थिति को।
डेसर्टहरू प्रयोग गर्नुहोस्, ठेठो खाना (सावधानीको साथ यदि तपाईंलाई नाजुक पेट छ भने), पसलहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस् र तपाईंको आँखामा बग्ने सबै चीजहरू सोख्नुहोस्। यदि तपाईं ग्यास्ट्रोनमीमा रुचि राख्नुहुन्छ र पेरुभियन संस्कृतिलाई पहिलो हातले जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँको "Cusco मा गर्न को लागी चीजहरु" को सूची मा मर्काडो डे स्यान ब्लास समावेश गर्नुहोस्।
व्यक्तिगत रूपमा, म शहरमा नयाँ पुग्दा पहिले गर्न मनपराउने एउटा चीजको दृष्टिकोणमा जानु उत्तम हुन्छ, यसको उत्तम आयामको कदर गर्नु। Pukamuqu, उचाईबाट Cuzco चिन्तन गर्न आदर्श स्थान हो।
ऐतिहासिक केन्द्रबाट करिब minutes० मिनेट पैदल दूरीमा अवस्थित, सेतो क्रिष्टको मूर्ति नजिकै, Pukumaqu एक प्राकृतिक दृष्टिकोण हो कि तपाईं शहर को एक अविस्मरणीय दृश्य प्रदान गर्दछ। सडकको लेआउट, रातो छाना, भवनहरू जुन उपत्यका र पहाडमा एकसाथ चिप्लन्छन्, कुजकोको विहंगम चित्र बनाउँदछ जुन तपाईं प्रेममा पर्न सक्नुहुन्न।
तपाइँ कस्कोबाट के भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ
२,2.430० मिटर उचाईमा र उष्णकटिबंधीय ज of्गलको मुटुमा माचू पिचू छ। पहाडहरूले घेरिएको पुरातन इन्का शहर विश्वका सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएका साइटहरू मध्ये एक भएको छ यो आधुनिक संसारको wond आश्चर्य मध्ये एक मानिन्छ म हैरान छैन! वास्तुकला अवशेष, पर्खाल, छतहरू, बादलहरूको बीचमा भेट्टाइयो जुन जादू र एक विशेष रहस्यवादको साथ खंडहर प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ छन् माचू पिचूमा पुग्न असंख्य सूत्रहरू कुज्कोबाट तपाई नि: शुल्क (रेल, कार वा बस द्वारा) भित्र जान सक्नुहुन्छ वा एजेन्सीका सेवाहरू भाडामा लिन सक्नुहुन्छ। के तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्दछ यदि तपाईं आफैं जानुहुन्छ भने त्यो हो, त्यस्तो उच्च ऐतिहासिक मूल्यको स्थान भएकोले, पार्क भ्रमणको लागि नियमहरू कडा कडा छन्: तपाईं मात्र एक आधिकारिक गाईडको साथ प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले आफ्नो टिकट किन्नु पर्छ। यी दुई चरणहरू अग्रिम रूपमा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईं आफ्नो यात्रा बुक गर्ने बित्तिकै, किनकि यस्तो व्यस्त ठाउँ र क्षमता सीमित छ, तपाईं यसलाई जान्ने मौका गुमाउन सक्नुहुन्छ।
मारास एक हो पेरुको रमणीय शहर, समुद्री सतहबाट 3.300०० मिटर माथि र कस्कोबाट km किलोमिटर माथि अवस्थित छ। सानो शहर यसको नुन फ्ल्याट को लागी परिचित छ। टेरेसहरूमा संरचित, प्राकृतिक नुन को भन्दा बढी3हजार कुवाहरु तिनीहरूले एक अद्वितीय परिदृश्य कन्फिगर कि तपाईं उदासीन छोड्ने छैन। थप रूपमा, नुन खानीहरू भित्र, झिकिएको नुनबाट बनेका उत्पादहरू बिक्री हुन्छन्। यदि तपाई विशेष कसैलाई स्मारिका लिन चाहानुहुन्छ भने तपाईले यी स्टालहरूको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, यदि तपाई कुनै उपहार वा प्रामाणिक स्मारिका किन्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
यो हुन सक्छ कुजकोबाट बसमा मारास पुग्नुहोस् र त्यसपछि मारासबाट ट्याक्सी लिएर नुन फ्ल्याटहरूमा पुग्न। अर्को विकल्प केहि लाई भाडामा लिनु हो यातायात समावेश पर्यटन एजेन्सीहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको टूरहरू। त्यहाँ एजेन्सीहरू छन् जुन मोटरसाइकल वा क्वाड द्वारा नुनको खानमा पुग्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ। अनुभव अविश्वसनीय छ, अत्यधिक सिफारिश गरिएको छ यदि तपाईं एक समूह मा यात्रा।
तपाईंको कस्कोको लागि व्यावहारिक सल्लाहहरू
कसरी Cusco मा पैसा परिवर्तन गर्ने
कुज्कोमा पैसा परिवर्तन गर्नु एकदम सजिलो छ, त्यहाँ जताततै विनिमय घरहरू छन्, विशेष गरी ऐतिहासिक केन्द्रमा, र दरहरू सामान्यत: उचित हुन्छन्। परिवर्तन गर्नु अघि, आफ्नै क्यालकुलेटरको साथ खाताहरू आफैं गर्नुहोस्, त्यसोभए तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ कि उनीहरूले तपाईंलाई कति दिनुपर्दछ र तपाईंलाई त्यहाँ पैसा दाबी गर्ने समस्यामा पर्दैन यदि त्यहाँ त्रुटि छ र तपाईंले पछि पत्ता लगाउनु हुन्छ।
विनिमय घरहरूको वरिपरि र केन्द्रको व्यस्त सडकहरूमा, तिनीहरू प्रायः तपाईंलाई प्रस्ताव गर्छन् कालोमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यद्यपि परिवर्तन अधिक लाभदायक देखिन्छ, म यो सिफारिस गर्दैन किनभने ती नक्कली बिलहरू तपाईंमा लुकाउन पनि सक्दछन्।
कुज्को वरिपरि कसरी पुग्ने
भाग्यवस, कुजको त्यो शहर हो यो खुट्टा मा धेरै राम्रो ढाकिएको छ। जे होस्, तपाईलाई ऐतिहासिक केन्द्रबाट केहि यात्रा गर्नु पर्ने हुन सक्छ र तपाई अझ टाढा रहेका ठाउँहरूको भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसैले म तपाईलाई कुस्कोमा यातायातको बारेमा केहि दिशानिर्देश दिनेछु।
कुज्कोमा ट्याक्सीहरू तिनीहरू धेरै सस्तो छन्, विस्थापन लगभग १० पेरू सोलियनहरू (२.२10 युरोको बराबर) हो। यदि तपाईं समूहमा जानुभयो भने यो उत्तम विकल्प हो र धेरै सस्तो खर्च।
सामान्यतया, मानिसहरू इमानदार छन्। यद्यपि पर्यटक भएर हामी सँधै हाम्रो मुल्य बढाएको वा समुद्री डाकू ट्याक्सीमा नजाँदै जोखिम चलाउँछौं (कुज्कोमा त्यहाँ छन्)। यस प्रकारको अवस्थाबाट बच्नको लागि, त्यहाँ कसैलाई सडकमा रोक्नु र यात्रा सामान्यतया कति लिन्छ भनेर सोध्नु उत्तम हुन्छ। ट्याक्सी ड्राइभरले तपाईंलाई वास्तविक मूल्यहरू दिईरहेको छ भने यसले तपाईंलाई मूल्य दिन्छ। अघि बढ्नु अघि ड्राइभरको साथ दरमा सहमत हुन प्रयास गर्नुहोस्, तपाईं समस्याहरूबाट जोगिनुहुनेछ। यद्यपि, मैले भन्नु पर्ने छ कि म कुनै प्रकारको समस्यामा परेको छैन।
कुज्कोमा बसहरू तिनीहरू निजी कम्पनीहरू द्वारा सञ्चालित छन्। प्रत्येक कारले तिनीहरू कहाँ जाँदैछन् भन्ने संकेत दिन्छ। टिकटको मूल्य ०.0,70० तौलको वरपर छ, जुन लगभग १eयूरो सेंट बराबर हो र तपाईं बस भित्र भुक्तान गर्नुहुन्छ। तिनीहरू प्राय: दुई दुई वा तीन मिनेटमा प्राय: हुन्छन्।
कुस्को पर्यटक टिकट
कुजको टुरिस्ट टिकट वास्तविक आश्चर्य हो। यो एक प्रकारको रूपमा काम गर्दछ वाउचर जसले क्षेत्रमा पर्यटन रुचि स्थानहरूमा पहुँच अनुमति दिन्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका टिकटहरू छन्: अभिन्न पर्यटक टिकट, जसले तपाईंलाई कुल १ places स्थानहरू भ्रमण गर्न अनुमति दिन्छ; र आंशिक टिकटहरू, जसले सूचीमा केहि स्थानहरूमा प्रवेश अनुमति दिन्छ।
यदि तपाईं लामो समयको लागि कुज्कोमा रहिरहनु भएको छ भने, म यसको बारेमा सोच्दिन। जे होस् BTC मा माचू पिचूको प्रवेश समावेश गर्दैन, यो लायक छ र एक महत्वपूर्ण बचत प्रतिनिधित्व गर्दछ शहर को सबै भन्दा प्रतीकात्मक स्थानहरु मा प्रवेश जब।
यो गाईडको सहयोग बिना एक्लै कुजको भ्रमण गर्न समान छैन। को नि: शुल्क भ्रमण छोरा ऐतिहासिक विवरणहरू जान्न चाहने यात्रुहरूको लागि अत्यधिक सिफारिश गरिएको प्रत्येक कुनाबाट जुन तिनीहरूले ईन्का साम्राज्यको पुरानो राजधानीमा पत्ता लगाए।
त्यहाँ बिभिन्न कम्पनीहरू छन् जुन तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्दछ र सामान्यतया तिनीहरू शहरको ऐतिहासिक केन्द्रबाट प्रस्थान गर्दछन्। अपरेशन एकदम सरल छ, तपाईले दर्ता गर्नुभयो (तपाई यसलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट गर्न सक्नुहुनेछ) र भ्रमणको अन्त्यमा तपाईले गाईडलाई उचित मान्नुहुन्छ।
उचाई रोगबाट सावधान रहनुहोस्!
समुद्री सतहबाट धेरै मिटर माथि भएको हुनाले, कुज्को भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूले भय "्कर "उचाई बिरामी" अनुभव गर्न सक्दछन्। यद्यपि यो एकदम अप्रिय छ र त्यहाँ कोही छन् जो साँच्चिकै खराब समय हो यो प्रायः यस्तो हुन्छ जब तपाईं शहरमा दुई दिनको लागि हुनुहुन्छ। लक्षणहरूको गम्भीरता प्रत्येक केसमा निर्भर गर्दछ, तर सामान्यतया चक्कर आउने, मतली र टाउको दुख्ने गर्दछ।
उचाईको रोगबाट बच्न, यो उत्तम हो प्रशस्त आराम पाउनुहोस्, धेरै ठूलो खाना नखान र धेरै पानी पिउनुहोस्। त्यहाँ तिनीहरूले लड्न कोका पातहरू चबाए। यदि तपाईं ती मध्ये एक हो जो धेरै गम्भीर लक्षणहरू ग्रस्त हुनुहुन्छ र "उचाई बिमारी" ले तपाईंको यात्रालाई दिक्क लगाइरहेको छ भने, तपाईं फार्मेसीसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ, केही औषधिहरू छन् जुन त्यसले यो राहत दिन्छ।
पानी र खाना
यदि तपाईं एक विदेशी हुनुहुन्छ, नलको पानी पिउन सल्लाह दिइदैन पेरू मा। यद्यपि केही पेरुभियनहरूले यसलाई कुनै समस्या बिना नै लिन्छन्, हुनसक्छ यो तपाईलाई प्रयोग नगर्दै तपाईलाई नराम्रो महसुस गराउन सक्छ। जोखिम लिन र फिल्टर वा बोतलको पानी मात्र पिउनु उत्तम हुँदैन।
खाना को रूप मा, उही कुरा हुन्छ। यो स्ट्रीट फूड खराब वा बिग्रिएको होईन, तर हो असुरक्षित पेटको लागि आक्रामक हुन सक्छ। तपाईले कोसिस गर्नु भएको कुरामा सावधान हुनुहोस् र केहि एन्टिडाइरियल औषधी बोक्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » के गर्ने कज्को (पेरु) मा: शहर मा तपाइँको यात्रा को लागी एक व्यावहारिक गाइड